Ianao YOU | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← Drone taxi? Très peu pour moi!
Mila anareo mpahay lalàna mitsangana ny Firenena →
Publié le 24 avril 2018 par andrianjorar
Sarin’i Karen Chesnutt
Mahagaga ahy ny fahakingan’ny olona nandia fianarana itsikera ny hetsika politika andalambe toy ny amin’izao fotoana izao sy ny fahaizany mitsikera ireo mpanao politika rehefa tsy mahatohitra ny jadona ataon’ny mpitondra. Fa inona ihany izany no tokony atao e?
Fa tsy fotoanan’ny fifampitsikeràna intsony izao fa fotoanan’ny fandraisana andraikitra, ka dia raisiko ho andraikitro no manoro hoe inona no azontsika tsirairay avy atao amin’ny sehatra misy antsika avy.
Ianareo ao amin’ny fikambanana ao amin’ny Firaisamonimpirenena Malagasy ROHY. Milaza ianareo fa misy fikambanana sy vovonana 120 mahery manerana ny faritra 22. Eny ary! Raiso ny ampinganareo fa aza faly mitsikera sy mitatasioka fotsiny. Raiso ho anareo izao tolom-bahoaka izao raha tsy tianareo anararaotra fahefana indray izay tonga manaraka eo. Ka io izy atolotro ho anareo!
Manaova fanangonan-tsonia miaraka amin’ny karapanondro eran’ny faritra 22 mangataka ny hanafoanana ny maha tsy maty manota ny mpitondra ka hahafahana mitsara azy ireo toy ny olon-tsotra. Angatahina koa mba tsy iankina amin’ny FRM (Filohan’ny Repoblika Malagasy) ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola sy ny fanarahana ny lalàna eo anivon’ny fanjakàna.
Ataovy mahatratra 2.000.000 ny sonia voahangona fa tsy misy mahavita izany izahay mpanao politika na iray aza. Fa raha vitanareo izany dia tsy maintsy anaiky ny teninareo izahay na iza na iza. Ary raha marina fa 120 fikambanana ianareo eran’ny Madagasikara, ka misy olona folo isaky ny fikambanana fotsiny ka mahangona sonia 200 isan’andro ianareo ireo dia erinandro dia vita izany! Ka mahasahy mandray andraikitra ianareo sa ivoretaka anome tsiny avy alavitra fotsiny?
Ianareo mpitsara, na ao anatin’ny SMM na tsia, ianao lehiben’ny BIANCO, ny tomponandraikitra rehetra amin’ny chaîne pénale, sy izay tokony ampiatra ny lalàna velona rehetra! Re ombieny ombieny fa mbola misy mpitsara tsy lomorin’ny kolikoly aminareo. Isaorana ny razana nitaiza anareo izany. Fa mitsangàna amin’izay. Raiso an-tanana ny fitoriana sy fitsaràna ireo manampahefàna iray tsikombakomba tamin-dramatoa Razaimamonjy dia raiso an-tanana ny fanasaziana ireo nividy vola ny SBB (solombavambahoaka) sy ireo SBB nandray kolikoly, dia indrindra indrindra raiso an-tanana ny fitsaràna ny adisoanay mpanao politika tsy ankanavaka amin’ny fomba tsy miandany, mba anavahana ny vary amin’ny tsiparifary. Dia aza miafina andamosin’izao sy itsy sy iroa intsony ianareo fa adidinareo izany. Raha misy manampahefàna mitsivalana tsy ahafahanareo miasa dia tonony ampahibemaso eto amin’ny 13 mey ny anarany ahafahan’ny malagasy rehetra mahafantatra hoe iza no tompon’ny kolikoly sy manakana ny fisian’ny rariny eto amin’ity tany ity. Rehefa tsy anao mantsy ianareo dia aza gaga raha lazaina fa lomorina daholo ianareo mpitsara ary aza gaga raha mianaka ny fitsaram-bahoaka satria ianareo mihitsy no tsy manao ny asanareo ka mahatonga izany.
Ianareo SBB voavidy vola. Ny eloka ibaboina hono mody rariny. Raha mandeha ireo tetika roa eo ambony ireo dia ianareo nandray vola teny amin’ny Paon d’Or no hiditra eny Tsiafaha voalohany miaraka amin’ireo nanome vola anareo. Fa izaho manana soso-kevitra mbola azo ialàna amin’izany. Ireo rehetra izay miaiky fa diso ary manao fifonana imasom-bahoaka dia avela ny helony fa miala amin’ny maha SBB azy izy. Ireo rehetra tsy miaiky fa mbola mizirirziry amin’ny adisoany kosa dia toriana sy saziana tsy misy hatakandro.
Isika olom-pirenena rehetra. Tsy mety ny fitokonana mampikatso ny firenena izany fa mahafaty ny nampaory antsika izany ary efa fantatra. Teny tsy voahevitra sy fisainana nilaozan’ny toetrandro izany. Fa fantaro kosa nefa fa ny fahafahantsika manaramaso sy mitsara ny mpitondra toy ny olompirenena rehetra (fa tsy mila mandalo fitsaràna manokana izany) no ahafahana manatsara aingana ny fitantanana ny raharam-pirenena satria na iza na iza tonga eo ka tsy voafehy ny fahefany, dia anararaotra foana, na olom-baovao io na tonta efa miverimberina.
Inona ary no azo atao ahatongavana amin’izany aingana? Zavatra efatra.
1. Mihestika ny tolom-bahoaka ankehitriny satria mafy loatra ny fanararaotana ataon’ny mpitondra. Tsara izany. Fa aza misy manaraka fahatany ireo tia tena tady ampikatso ny firenena intsony. Fa rehefa tombotsoa iombonana kosa dia aleo miray hina mampiseho ireo mpanao politika manampatra fahefàna fa mpiasanareo nampidramina toerana izy ireo izay tonga eo fa tsy tompony.
2. Izay mitarika ny fahafahana manaramaso sy mitory ny mpitondra nania ihany no afaka manala antsika amin’izao 58 taona nihafiana sy nijaliana izao fa tsy ny famonoana tena na ny fanohanana fahatany an-dRakoto na Rabe ho eo amin’ny fitondràna. Ka mahaiza mifidy ireo mpitarika amin’ny tsara fa aza manaiky taritina any amin’ny hadalàna intsony isika. Fanarahana maso sy fanasaziana ny mpitondra mandika lalàna no vaha-olana.
3. Anjaran’ny mpanao politika ny mifaninana hitondra fanjakàna fa tsy azo ekena intsony izany tetezamita izany fa famelomana ireo mpanao politika tsy misy lanjany sady mpanararaotra izany. Tsy maintsy homena antsika ny fahafahana mifidy ka noho izany dia tsy azo ekena ny fanemorana ny fifidianana.
Izay no sosokevitra tsotra azontsika tsirairay avy atao izao dia izao mba ampandrosoana ny firenena. Ary ny fiezahana mankany amin’ny fahendrena no tena tolona mba tsy anaiky ho lembenan’ny dondrona sy ny mpangalatra rehetra izao.
Masina ny tanindrazana ary adidintsika ny miaro ny taninjanaka.
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué adidin'ny tsirairay, fanaraha-maso, fitsaràna ny mpitondra, Tanindrazana, taninjanaka, Tolom-bahoaka. Ajoutez ce permalien à vos favoris.